सर्वोच्चले सदर गर्यो चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, मूल्य बढ्ला त ? « GDP Nepal
सर्वोच्चले सदर गर्यो चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, मूल्य बढ्ला त ?
Published On :5June, 2018 11:55 am
काठमाडौं । सरकारले अन्ततः चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल असुल गर्न पाउने भएको छ । यसले स्वदेशी चिनीको मूल्य नबढे पनि आयातित चिनीको मूल्य भने बढ्नेछ ।
हाल बजारमा चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो हाराहारीमा छ भने कर जोडिएको चिनी बजारमा प्रवेश गर्दा ९० देखि १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
स्वदेशी चिनी उत्पादकले लागत बढेको भन्दै मूल्य कार्टेल गरी झन्डै १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य कायम गर्ने सम्भावना रहेको एक खुद्रा व्यवसायीले बताए ।
मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर नभए पनि स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै यसअघि सरकारले १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महसुलमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भटराईको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै सरकारलाई बढेको कर असुल्न बाटो खुला गरेको हो ।
चिनीमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णयविरुद्ध ज्ञान इण्टरप्राइजेज साझेदारी फर्म, श्याम बाबा इण्टरप्राइजेज प्रालि, रेन्बो ओभरसिज प्राइभेट फर्मलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेक थिए । आफूहरुले करोडौं मूल्यको चिनी आयात गर्दागर्दै सरकारले महसुल दर वृद्धि गर्दा ठूलो क्षति पुग्ने उनीहरुको मागदावी छ ।
ति कम्पनीको निवेदनमाथि गत वैशाख २८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । तर सोमबारको संयुक्त इजलासले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
सरकारको चिनी आयात भन्सार महसुल दर ऐन कानूनबमोजिम भएको ठहर गर्दै अदालतले सरकारी निर्णय सदर गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानबमोजिम आयातित खाद्यवस्तुमा अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था छ ।